Umhambisi wamanzi → I-HoReCa • Ihotele • Ihotele • I-Warsaw yecatering
Ngaba uyayifuna into yokuhambisa amanzi kwihotele, kwindawo yokutyela? Inkampani yaseWater Point ibonelela izihluzi zamanzi ezingenabhotile, baseliUmthombo weenkokheli zehlabathi kumzi mveliso, apho sisasaza yedwa ePoland.
Umgangatho olungileyo amanzi ibalulekile ebomini kwaye kufuneka ifumaneke rhoqo, ekhaya nasemsebenzini.
Kwiindawo ezifana iivenkile zokutyela, ikofu, imivalo i iihotele kubalulekile ukuba iindwendwe zihlale zinokufikelela okungenamkhawulo kumanzi anambithekayo kwaye asempilweni.
Amanzi anikezelweyo kufuneka ahlangane nokulindelweyo kubathengi, ngakumbi nangakumbi rhoqo kumzi mveliso I-HoReCa EPoland, isebenzisa izisombululo zehlabathi, ukuxhobisa izakhiwo zayo ngezinto zokucoca zamanzi ezinempilo ezicocekileyo nezisempilweni, imithombo yamanzi kunye nosela loluntu.
Ukusetyenziswa kwetekhnoloji emitsha yokuvelisa ivumela ukwenziwa kwemveliso ekumgangatho ophezulu zokuhambisa amanzi ezihlangabezana nokulindelwe ngabona bathengi bafuna kakhulu.
Ukuhanjiswa okucetywayo kwenza ukuba ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kumgangatho ofanelekileyo wamanzi kwiihotele, iindwendwe, imigoqo kunye neeresityu, i.e. naphi na apho kufanelekileyo ukuba kugcinwe ukhuseleko kunye nempilo yeendwendwe ezityelele kwezi ndawo.
Ohambisa amanzi kwihotele, iresityu okanye ikhefi kufuneka abonakale ngokusebenza okuphezulu kakhulu kokuhambisa amanzi kunye netekhnoloji yokupholisa esetyenzisiweyo.
Izixhobo zokuhambisa amanzi okusela ezenzelwe icandelo le-HoReCa kufuneka zakhiwe ngendlela yokuqinisekisa ucoceko olupheleleyo lokusebenzisa.
Umsasazi onjalo unokuxhotyiswa ngenkqubo yokufayilisha kwamanzi okanye isilinda se CO2.
Izinto zokuhambisa amanzi zokutyela okanye iihotele ziqinisekisa umgangatho ophezulu wamanzi okusela asetyenziswa ziindwendwe.
Imithombo yanamhlanje yokuhambisa amanzi okusela kunye nexabiso lokuhambisa amanzi ashibhile ekusebenzeni kwaye isebenza ngokukuko kwaye ithandwa kakhulu kwimarike, qinisekisa udumo kwindawo yokutyela, ikhefi okanye ihotele, kunye nenqanaba eliphezulu lenkonzo yeendwendwe. Inzuzo eyongezelelweyo luyilo lwangoku lwesixhobo, esenza ukuba abo baselayo bahombise naliphi na indawo.
Isiselo sokuhambisa amanzi siqinisekisa ukufikelela kumanzi asemgangathweni ophezulu ngawo wonke umntu, ngamaxesha onke.
Umgangatho wehotele, ivenkile yokutyela okanye i-pub iyachukunyiswa, phakathi kwabanye, ngumgangatho wamanzi okusela akhonzwa apho. Ukuba ilungiswe ngokufanelekileyo kwaye yakhonzwa ngokufanelekileyo, umzekelo kwikaravani enombhalo kunye neminti, oko kunambitha okukhulu kwaye kujongeka kunomdla kwangaxeshanye, ngokuqinisekileyo kuya kuphucula umfanekiso wendawo.
Ukunambitheka kwaye kusha, akukho shushu, chlorine kunye neentsholongwane, amanzi anokuvela kubahambisa amanzi namhlanje. La manzi acociweyo, acocekileyo anokuhanjiswa ngeebhotile okanye iiaraveni, okanye unokwenza iilamuni ezihlaziyayo.
Abantu abaninzi ngakumbi basebenzisa izixhobo zangoku zokucoca amanzi emakhayeni abo kwaye balindele ukuba xa besebenzisa iinkonzo zehotele okanye ivenkile yokutyela, basebenzise namanzi asempilweni nasempilweni.
Ukuhambisa amanzi kwi-dispenser kuya kuba nefuthe elihle kumfanekiso wendawo, okhathalela impilo yeendwendwe zayo kunye nokusingqongileyo, kuba ngenxa yesi sixhobo isixa senkunkuma evelisiweyo sincitshiswe kakhulu.
Amanzi alungiselelwe ngale ndlela anokuba yinto enkulu ehlotyeni kubo bonke abanxaniweyo, oya kuthi enze isigqibo sokusebenzisa iinkonzo zokutyela.
5 / 5 ( 24 iivoti )
umatshini wokuthengisa amanziamanzi asimahla kwihoteleamanzi asimahla kwindawo yokutyelaamanzi ashushu kwihoteleamanzi asimahla kwihoteleisitshisi samanziisitshisi samanziisitshisi samanziisitshisi samanzi ehoteleisasazi yokuhambisa amanzi kwiivenkile zokutyelaisitshabalalisi samanzi esitshiweyohc66l isitshisi samanziixabiso lokuhambisa amanziisaphulelo sokuhambisa amanziohambisa amanzigassing yamanziifriji ene-dispenser yamanziumatshini wokuhambisa amanziisixhobo sokuhambisa amanziisixhobo samanzi ekhabhoniAmanzi akho kwindawo yokutyelaamanzi e-gastronomyamanzi kwindawo yokutyelaamanzi aqabukayo aphuma empompiniamanzi amaminerali kwihoteleamanzi ebhafiniamanzi kwi-gastronomyamanzi ehoteleamanzi kwi-cafeamanzi kwindawo yokutyelacofa amanzi kwihotelecofa amanzi kwindawo yokutyelaamanzi entwasahloboamanzi abandayo kwihotele